Laba askari oo ka tirsan Booliska Kenya oo lagu toogtay magalada Garissa
Garissa:-Wararka ka imaanaya magalada Garissa ayaa sheegaya in maanta dhu´hurkii halkaas lagu toogtay laba askari oo ka tirsan Booliska Kenya waxaana ay toogashada ka dhacaday suuqa wayn ee magalada Garissa ee Suuq Mugdi .
Toogashada labada askari ee ka tirsan ciidanka Booliska ee Kenya ayaa saxaafada u xaqiijiyey taliyaha saldhiga booliska ee magalada Garissa wuxuuna sheegay in ay baxsadeen raga dilka u geystay labada askari.
Ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Booliska iyo Melatariga ayaa soo gaaray suuqa wayn ee magalada Garissa ee Suuq Mugdi waxayna qabteen dad ku sugnaa suuqa iyaga oo la aaday saldhiga Booliska magalada Garissa .
Ma aha markii ugu horaysay oo magalada Garissa lagu toogto askar ka tirsan ciidanka Booliska ee Kenya waxaana ay dowlada Kenya ku eedeysaa mar walba dilalka ka dhaca magalada Garissa Ururka Al-Shabaab.
Ilaa haatan ma jiraan cid sheegatay dilka labada askari ee maanta duhurkii lagu toogtay suuqa wayn ee magalada Garissa ee Suuq Mugdi .